Lord Ernest Rutherford: biography, ihe ndị ọhụụ na ihe ọhụụ | Network Meteorology
N'etiti ndị ọkà mmụta nke nyere onyinye dị ukwuu na sayensị na narị afọ gara aga anyị nwere Rutherford. Aha ya nile bu Lord Ernest Rutherford ma amuru ya n’abali iri-ato n’ime onwa asato, onwa asaa n’afọ 30. Obu onye British physicist and chemist nyere otutu onyinye na uwa nke sayensi. Amuru ya na Nelson, New Zealand. Otu n’ime onyinye ndị kacha mkpa o nyere sayensị bụ ụkpụrụ atọmịk Rutherford.
N’isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ndụ Rutherford na akụkọ ndụ ya.
1 Akụkọ ndụ Rutherford
2 Nchoputa mbu
3 Rutherford chọpụtara
4 Onyinye Nobel na Chemistry
Akụkọ ndụ Rutherford
Ọ bụ nwa nwoke Martha Thompson na James Rutherford. Nna a bụ onye ọrụ ugbo na onye ọrụ ụgbọ ala ndị Scotland na nne ya bụ onye nkụzi Bekee. Ọ bụ nke anọ n'ime ụmụnne iri na otu na ndị mụrụ ya chọrọ mgbe niile inye ụmụ ha agụmakwụkwọ kacha mma. N'ụlọ akwụkwọ onye nkụzi gbara ya ume nke ukwuu site n'ịghọ nwa akwụkwọ nwere ọgụgụ isi. Nke a kwere Ernest Enwere m ike ịbanye na kọleji Nelson. Ọ bụ kọleji nwere nnukwu nchekwa maka ọtụtụ ndị nwere ọgụgụ isi. O nweela ike ịzụlite nnukwu àgwà maka rugby nke mere ka ọ bụrụ onye ama ama na ụlọ akwụkwọ ya.
N'afọ nke ikpeazụ ya, ọ họọrọ nke mbụ na ngalaba niile wee nwee ike ịbanye kọleji Canterbury. Mgbe e mesịrị na mahadum o sonyere na iche iche ndị ọkà mmụta sayensị na ndị na-atụgharị uche ma ha elegharaghị omume rugby ya anya. Afọ ole na ole ka e mesịrị, ọ mụbara ọmụmụ ihe ya na mgbakọ na mwepụ n'ihi agụmakwụkwọ nke e nwetara na Mahadum New Zealand. Mgbe e mesịrị, ọ kwụpụrụ maka ọchịchọ ịmata ya na ikike ya idozi ọtụtụ nsogbu kemịkal na som. Ya mere, ọ nwere ike ịbụ nnukwu nwa akwụkwọ na Cambridge.
Nnyocha mbụ nke Rutherford malitere igosi na a pụrụ ime ka ígwè nwee ike ndọta site n'ọtụtụ okporo ígwè dị elu. Nsonaazụ ya magburu onwe ya nyere ya ohere ịga n'ihu na ọmụmụ ihe dị iche iche na nyocha ruo ọtụtụ afọ. Na Cambridge Cavendish Laboratories nwere ike ịrụ ọrụ ya n'okpuru nduzi nke onye na-achọpụta electron bụ Joseph John Thompson. Omume ndị a malitere ịrụ site na afọ 1895.
Tupu ọ gawa ịmalite njem nke nyocha ahụ, ya na Mary Newton kwere onwe ha nkwa ọlụlụ. Ọtụtụ afọ ka e mesịrị na ekele maka ọrụ ya, a họpụtara ya prọfesọ na Mahadum McGill na Montreal. Nke a bụ na Canada. Ọtụtụ afọ ka e mesịrị, na nloghachi ya na United Kingdom, ọ sonyeere ndị ọrụ nkuzi na Mahadum Manchester. Ọ bụ ebe a ka ọ malitere ịkụzi klaasị ọmụmụ physics. N'ikpeazụ Thompson rida dị ka onye ntụzi ọrụ nke ụlọ nyocha Cavendish na Mahadum Cambridge na Rutherford nọchiri ya.
Otu okwu okwu sayensị kachasị pụta ìhè bụ ihe ndị a:
"Ọ bụrụ na nnwale gị chọrọ ọnụ ọgụgụ, nnwale ka mma gaara adị mkpa." Ernest Rutherford
Na 1896 redioactivity achọpụtalarị na nchọta a nwere nnukwu mmetụta na onye sayensị a. N'ihi nke a, ọ malitere nyocha na ime nyocha site na ịgafe oge na ịnwa ịmata isi ihe radieshon. O gosipụtara na mkpụrụ alpha bụ helium nuclei na juru onye ọ bụla na sayensị anya na usoro nke tiori nke usoro atomic. Nke ahụ bụ ebe mbido atom nke Rutherford si. Maka ụgwọ ọrụ, a hoputara ya onye otu Royal Society na 1903 wee bụrụ onye isi ala.
Nke a na atọm nlereanya a kọwara na 1911 na-egbu maramara site na Niels Bohr. Ka anyị lee ihe bụ ụkpụrụ nduzi bụ isi nke atọmịk nke Rutherford:
Akụkụ ahụ nwere ụgwọ dị mma n'ime atọm a na-ahazi ha na obere olu ma ọ bụrụ na anyị ejiri ya tụnyere ngụkọta nke atom kwuru.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnụ ọgụgụ atọm atọm ọ bụla dị n’obere olu ahụ e kwuru okwu ya. A na-akpọ ihe a dị n'ime ya nucleus.
Elektrọn ndị nwere ebubo na-adịghị mma a na-ahụ na-agbagharị gburugburu etiti ahụ.
Ndị electrons na-agbagharị n’ọsọ dị elu mgbe ha na-agagharị gburugburu ha ma ha na-eme ya na ụzọ okirikiri. A na-akpọ trajections ndị a orbits. Emechaa m ga a maara ha dị ka orbitals.
Ma ndị electrons ndị e boro ebubo n'ụzọ na-adịghị mma na ntọala nke ihe a na-ebo ebubo na-akwụ ụgwọ na-ejikọ ọnụ mgbe niile maka ike na-adọrọ adọrọ nke electrostatic.
E gosipụtara ihe a niile site na nnwale wee kwe ka ịmebe usoro nhazi maka ezigbo mgbatị nke nuklia nuklia. Ernest chepụtara tiori banyere nrụrụ redio nke sitere na mgbanwe mgbanwe nke ihe ndị ahụ. Ọ bụrụ na ọ dịrị ndụ dị ka onye na-arụkọ ọrụ ọnụ na teepu radieshon maka ọrụ ya n'ọhịa nke atomiki physics. N'ihi ya, a na-asọpụrụ ya dịka otu n'ime ndị nna nke ọzụzụ a.
Onyinye Nobel na Chemistry
Onyinye sayensị nyere aka na Agha Worldwa Mbụ. Ọ ga-ekwe omume ịme ọmụmụ dịgasị iche iche maka nchọpụta nke ụgbọ okpuru mmiri site na iji ebili mmiri. Nke a bụ mmalite izizi nke ọmụmụ ahụ, ọ bụ ezie na esemokwu ahụ gwụrụ, mbugharị mbu nke ihe ndị mejupụtara site na bombarding a atom nitrogen dị ka mkpụrụ alpha. A ka na-enyocha nnukwu ọrụ Rutherford niile taa n'ọbá akwụkwọ na mahadum gburugburu ụwa. Ọtụtụ n'ime ọrụ ya ha metụtara redioactivity na radieshon sitere na ihe redioactive.
N'ihi ihe ọmụma ọ nwetara na nyocha ya banyere disin disgering of the elements, ọ nwee ike inweta Nrite Nobel na onwu na 1908, tupu ibipụta ụdị atọm ya. Element 104 nke okpokoro oge a na-akpọ Rutherfordium maka nsọpụrụ ya. Kaosinadị, anyị maara na ọ nweghị ihe na-adịru mgbe ebighi ebi, n'agbanyeghị na onye ọkà mmụta sayensị a nwere nnukwu ọganihu na sayensị, ọ nwụrụ na Ọktọba 19, 1937 na Cambridge, England. Egburu ozu ya na Westminster Abbey ma ebe ahụ ha na ndị ọzọ zuru ike Sir Isaac Newton na Lord Kelvin.
Dịka ị pụrụ ịhụ, e nwere ọtụtụ ndị ọkà mmụta sayensị ndị nyerela ọtụtụ ahụmịhe na ihe ọmụma banyere ụwa sayensị, ma, ha niile na-eme ka anyị mara karịa. Enwere m olile anya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere akụkọ ndụ na ihe egwu nke Lord Ernest Rutherford.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Rutherford